Kooxda Jiraban ee Jwxo-shiil, oo Caasmara Lagu Canaantay – Rasaasa News
Nov 28, 2010 beel ku jabhad, dambiile, Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, Kooxda Jiraban ee Jwxo-shiil, nabad diid, Ogaden, oo Caasmara Lagu Canaantay, peace
Waxaa labadii todobaad ee ugu dambeeyey uu kulan uga socday magaalada Caasmara Kooxda jiraban ee Jwxo-shiil iyo saraakiisha ciidanka ee Eritrea, iyaga lagu siiyey go,aamo lid ku ah nabada degaanka Somalida oo kaliya.
Wadahadalka ayaa waxaa uu ahaa mid ay abaabushay xukuumada Argagixisada ah ee Caasmara, waxaana uu ka dhan ahaa heshiisyada nabadeed ee dhexmaray urarada ONLF iyo UWSL iyo dawlada Ferderalka ah ee Itobiya. Waxaa kale oo kulankoodu ku saabsanaa sidii ay uga hortagi lahaayeen siyaasada furfuran ee ay la timid dawlada Itobiya.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa waxaa ay ku taagan tahay magaca beeleed iyo amarada xukuumada Caasmara iyo lacagaha ay ku taageerto ee ay kula dagaalamayso dawlada Itobiya. Kooxda Jwxo-shiil, ayaa ah mid aad uga soo horjeeda danaha guud ee dadweynaha Somaliyeed eek u dhaqan gabalka Ogaden.
Kulanka Caasmara, waxaa ka soo baxay go,aan ah sidii ay uga hortagi lahaayeen nabada ka socota dhulka Somalida Ogadeeniya kooxda Jwxo-shiil iyo Eritrea, iyada oo ay la kaashanayaan dalal carbeed oo ay haatan xurgufi ka dhaxayso dawlada Itobiya.
Kooxda Jwxo-shiil, waxaa loo qaybiyey in ay ka hawl galaan labo dal oo kala ah Masar iyo Kenya iyo waliba dal sadexaad oo carbeed oo aanaan wali magaciisa helin.
Sida ay wararku sheegayaan kooxda Jwxo-shiil, waxaa xafiis laga siiyey magaalada Qaahira, waxaana ay dawlada Masar u balan qaaday tababar iyo lacag. Dalka Masar awal hore wax wanaag ah iyo xidhiidh walaaltinimo midna uma haynin ummada gabalka Ogaden, dabka ay doonayso in ay manta ka shido waa mid ay ayadu ku danaysanayso oo ay rabto in ay ku cabsi galiso khilaafka Biyaha ee u dhaxeeya iyada iyo dawlada Itobiya. Xubnaha ilaa iyo hada jooga dalka Masar waxaa ka mid ah Ina-dhuubo iyo Yusuf Cadami oo isagu ku laabtay dalka Ingriiska.
Dhinaca kale waxaa iyana gaadhay Nayrobi saddex xubnood oo aanaan wali magacyadooda helin, waxaase la filyaa in ayna taageero ka helidoonin dalka Kenya, in kasta oo awal hore uu ahaa meesha ay ugu taageero badan yihiin.
Waxaa aynu isha ku hayndoonaa rabitaanka nabada ee dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo meesha ay ku dambayso xasarada ay beeshu ka dambayso ee kooxda Jwxo-shiil, ee ay dabada ka riixayaan dalalka shisheeye ee iyagu danahooda ku fushanaya.
Rafashadii Ugu Danbaysay Ee Kooxda Ina Cumar Cismaan